DEG DEG:- Baarlamaanka oo goordhaw si rasmi ah u ansixiyay ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Baarlamaanka oo goordhaw si rasmi ah u ansixiyay ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya
Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goordhaw si rasmi ah u ansixiyay ra’iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kulanka kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay soo xaadireen illaa 231 xildhibaan ayaa maanta codkooda si buuxdo ugu ansixiyay ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo natiijadda ku dhawaaqay ayaa sheegay in kulanka ay soo xaadireen 231 xildhibaan, islamarkaana ay guud ahaantooda codka kalsoonida siiyeen ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo khudbad kooban ka jeediyay ansixinta baarlamaanka kadib ayaa xildhibaanada uga mahad celiyay sida hufnaanta ah ay xilka ugu aamineen, isagoona sidoo kale ballan ku qaaday inuu si daacad oo dhaw ula shaqeyn doonno.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ansixinta baarlamaanka kadib waxaa loo dhaariyay xilka loo magacaabay, waxaana lagu wargeliyay in muddo 30 maalmood ah uu haysto inuu kusoo dhiso xukuumadda cusub ee Soomaaliya.